विहीबार भगवान विष्णुको व्रत बस्दा कस्तो फल प्राप्ति हुन्छ ? हेर्नुहोस् (पूजा विधिसहित)
July 23, 2020 948
विहीबार देवताका गुरु बृ’हस्पति तथा भग’वान श्री हरि विष्णुको पूजा गरिन्छ । आजको दिन व्रत बस्नाले धन, पुत्र तथा विद्या प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ ।
पहेलो रंगको कपडा ल’गाउने र पहेलै वस्तु’को दान गरेमा शुभ मिल्नेछ । साथै, यो दिन विष्णुकी पत्नी लक्ष्मीको पनि पूजा गरिन्छ । यो व्रत शुक्लपक्षको पहिलो विहीबारबाट सुरु गर्नुपर्दछ । त्यस दिन अनुराधा नक्षत्र परेमा अझ शुभ मानिन्छ ।
बिहान स्नानपछि पहेलो वस्त्र धारण गर्ने । त्यसपछि पहेलो फूल र चन्दनलाई एक साथ मिलाएर प्रसाद बनाउने । यस प्रसादला’ई भगवानलाई अर्पण गरेर पूजा गरौँ । यस’बाट भगवान विष्णु प्रसन्न भएर उहाँको आर्शिवाद तपाईंको घरमा सधैँ भइरहने छ ।
यो व्रत १३ महिना वा कम्तिमा ७ महिनासम्म लिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । व्रतको दिन शुद्ध भएर पहेँलो कपडा लगाई ‘ॐ गुरवे नमः’ मन्त्र कम्तिमा पाँच माला जाप गर्नुपर्दछ ।
विहीबारको व्रत लिँदा केराको रुखलाई पू’जा गर्ने चलन छ । पूजा गर्दा पहेँलो चन्दन, चनाको दाल, छाता, मिठाईको रुपमा लड्डु आदि’को दान गरेमा लाभ मिल्नेछ । भोजन गर्दा एक छाक नुन बार्नुपर्दछ ।
पौराणिक कथाअनुसार एक’जना प्रतापी र दानी राजा थिए । उनको दरबारमा अ’साध्यै धेरै सम्पत्ति थियो । उनी प्रत्येक विहीबार व्रत बस्ने तथा पुण्यकर्म गर्ने गर्दथे ।
तर रानी भने त्यस्तो के’ही कर्म गर्दिन थिइन् । राजाले गरेको धार्मिक कार्यलाई रानीले असहयोग गर्थिन् । दरबा’रमा थुप्रिएको सम्पत्तिका कारण आफूले धेरै काम गर्नु परेकोमा उनी चिन्तित हुन्थिन् ।
एक दिन गुरु वृहस्पति उन’को दरबारमा साधुको रुप धारण गरी पुगे । त्यसबेला रा’जा शिकार खेल्न जंगल गएका थिए । रानीले साधुलाई देखेर आफ्नो दरबारमा भएको सम्पत्ति तथा वैभव समा’प्त पारिदिन आग्रह गरिन् ।
साधुरुप धारण गरेका गुरु वृहस्पति’ले पनि रानीको चाहना पूरा गर्न फल प्राप्ति हुने क’र्म भन्दा पनि नष्ट हुने कर्म गर्न सिकाउँछन् । रानीले विहीबारको दिन त्यसै गर्छिन् ।
दरबारको सम्पूर्ण वैभव स’माप्त हुन्छ । दुःख पाएपछि राजा कामका लागि परदे’श लाग्छन् । दरबारमा भएका रानीह’रुले पनि भोकभोकै बस्नु पर्ने दिन आउँछ । यो दुःखका बीच रानीले आफ्नी बहिनी कहाँ सहयोग माग्न पुग्छिन् ।
बहिनीले उनीह’रुलाई धन प्राप्तिका लागि विहीबारको व्रत बस्न सुझाउँछिन् । त्यसपछि रानी र उनका दासीहरु विही’बारको दिन व्रत बस्न थाल्छन् । व्रत बस्न थालेदेखि फेरि दरबारमा सम्पत्ति थुप्रिन थाल्छ ।
दरबारमा सुख मिल्न थाल्छ । परदेश ग’एका राजा पनि फिर्ता आउँछन् ।
अतः विही’बारको दिन व्रत बसेको खण्डमा सम्पत्ति तथा वैभव प्राप्त हुने जनविश्वास रहँदै आएको छ । – खबर हब
Prevआज साउन ८ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस् ….
Nextसरकारी मोटरसाइकलमा भाइरल भएका युवायुवती आए मिडियामा (भिडियो सहित)
भाइरल दुलही माईत फर्किइन्, अर्को भिडियो पनि भयो भाइरल (भिडियो सहित)
राजमहल भन्दा कम छैन नायिका मनिषा कोइरालाको घर… हेर्नुहोस्.. [भिडियोसहित]
स्वेताले नाच्दै श्रीमानलाई भनिन् “म हजुरलाई मायाले रूवाईदिन्छु” (भिडियो हेर्नुहोस्)